नेपाल Archives - Lokpati.com
Tag - नेपाल
इतिहास/सभ्यता • समाज
काठमाडौं। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो। जसबाट नेपाल अङग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा...
‘संसद विघटनको भत्र्सना गरौं, संविधानको रक्षाका लागि एक्यवद्धता प्रदर्शन गरौं’
काठमाडौं। संविधानसभा सदस्य मञ्च, नेपालले संविधान सभा विघटनको भत्सना गरेको छ। मञ्चले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानसभाको मर्म र...
नेपाल एक दक्षिण एसियाली हिमाली राष्ट्र हो। यसको भौगोलिक अक्षांश २६ डिग्री २२ मिनेटदेखि ३० डिग्री २७ मिनेट उत्तर र ८० डिग्री ४ मिनेटदेखि ८८ डिग्री १२ मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। यसको कूल क्षेत्रफल...
किन आइन् नेपाल सन्नी लियोनी ?
काठमाडौं, २६ भदौ। बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी नेपाल आएकी छिन्। उनी एअर इन्डियाको फ्लाइटमार्फत नेपाल आएकी हुन्।
उनी आफ्नो आइटम डान्स रहेको चलचित्र ‘पासवर्ड’ को प्रिमियरका लागि राजधानी उत्रिएकी हुन्। यसअघि उनी बिजनेस...
नेपाललाई पाँच वर्षसम्म निःशुल्क स्याटलाइट इमेज उपलब्ध गराउने चीनको तयारी
काठमाडौं, ९ भदौ। नापी विभागले विकास निर्माणका आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व अति आवश्यक पर्ने स्याटलाइट इमेज लिन थालेको छ। नापीले समग्र नेपालको स्याटलाइट इमेज लिन थालेको हो। विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि अद्यावधिक...
काठमाडाैं। सबै कुरामा परनिर्भर रहेकाे भनिए पनि नेपाल आँखाकाे लेन्स उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर भएकाे मानिन्छ। नेपालमा २५ वर्षदेखि आँखाको लेन्स उत्पादन हुँदै आएको छ ।
मोतीबिन्दुका बिरामीलाई चाहिने लेन्स भने तिलगंगा आँखा...
नेपालमा भित्रिएका कुन गाडीलाई कति पर्छ ? (हेर्नुस् नयाँ मूल्यसूचि)
देशमै अटोमोबाइस् उत्पादक कम्पनी नभएको अवस्थामा हाल नेपालमा विभिन्न देशहरुबाट सवारी साधनहरु आयात हुँदै आएका छन् । छिमेकी देश भारत–चीन देखि अमेरिका, बेलायत, जापान लगाएत युरोपियन देशहरुबाट समेत नेपालमा सवारी साधनहरु आयात हुने...
किन आए रअ प्रमूख अकस्मात नेपाल ?
काठमाडौं, ६ साउन। भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमूख समान्तकुमार गोयल आइतबार नेपाल आएका छन्। गोयलसहित पाँच जनाको टोली आइतबार दिउँसो काठमाडौं आएको हो।
गोयल नेतृत्वको टोली पाँचदिने भ्रमणका लागि...
हङकङलाई हराउँदै नेपाल यू–१९ एसिया कपमा छनोट
काठमाडौं, २४ असार । नेपालले यू–१९ एसिया कप खेल्ने भएको छ। मंगलबार पूर्वी क्षेत्र छनोटको फाइनलमा हङकङमाथि ६ विकेटको शानदार जित हात पार्दै नेपालले एसिया कपमा स्थान बनाएको हो।
मलेसियाको किनरारा ओभलमा हङकङले दिएको मात्र ९६ रनको...
यू–१९ एसिया कपमा नेपाल हङकङविरुद् ब्याटिङमा
काठमाडौं, २४ असार । यू–१९ एसिया कपमा स्थान बनाउन नेपालले ९६ रनको लक्ष्य पाएको छ।
नेपालले केहीबेरमा ब्याटिङ गर्नेछ। किनरारा ओभलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङले ४३.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ९५ रन बनायो।